Marijuana bụ akwụkwọ nri' ma ekwesịrị ịre ya na Boulder, ahịa ndị ọrụ ugbo CO, Pot Venture Capitalist kwuru - Echiche 2022
Marijuana bụ akwụkwọ nri' ma ekwesịrị ịre ya na Boulder, ahịa ndị ọrụ ugbo CO, Pot Venture Capitalist kwuru
N'ịgbaso iwu wii wii nke afọ gara aga, steeti Colorado ahụla nnukwu mgbanwe na-ewere ọnọdụ n'ime oke ya - nke kachasị ọhụrụ bụ ntinye sitere n'aka otu onye na-achụ ego nke kwenyere na a ga-ekewa osisi ahụ dị ka akwụkwọ nri ma ree ya n'ahịa ndị ọrụ ugbo.
Justin Hartfield, onye isi ego wii wii venture na onye isi nke WeedMaps, enyela akwụkwọ mkpesa nye ọtụtụ ọgbakọ gburugburu Boulder, CO mpaghara, gụnyere onye isi obodo, ndị isi obodo, na ndị na-ahazi ahịa ndị ọrụ ugbo. N'ime akwụkwọ mkpesa ahụ, Hartfield kwadoro ka ree ọgwụ ọhụrụ nke iwu kwadoro n'akụkụ tomato na ụlọ ọka ọka.
"Marijuana bụ akwụkwọ nri, dị ka akwụkwọ nri ọ bụla a na-ere n'ahịa Sunday na Boulder," Hartfield gwara Daily Ticker. "Anyị chere na ndị Boulder ga-achọ ya ebe ahụ."
Ọchịchọ Hartfield buru amụma nwere oge tupu o nwee ike ịmalite. Dị ka Patrick von Keyserling, onye isi mgbasa ozi nke obodo Boulder si kwuo, "Ndị ọrụ obodo na-atụ aro ugbu a ka a ghara iwere ngwa ntụgharị wii wii ntụrụndụ ruo June 1, 2014 site na Boulder, n'ihi ya, ọ ga-abụ iwu na-akwadoghị maka azụmahịa ịme azụmahịa na nke a. n'oge a n'ọnọdụ ọ bụla."
Hartfield ka na-akụda mmụọ, n'agbanyeghị, na-ekwu na n'ihi na "marijuana bụ ihe oriri, dị ka akwụkwọ nri ọ bụla a na-ere n'ahịa Sunday na Boulder," ịmalite mkparịta ụka ahụ n'isi ga-eme ka ndị mmadụ mara ya n'ahịa ha.
"Ihe anyị chọrọ ime bụ ịmalite mkparịta ụka ugbu a," ka ọ kọwara. "Anyị chọrọ ime ka ndị mmadụ na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị njikere maka echiche a na wii wii bụ osisi dị ka osisi ọ bụla ọzọ na a ga-emeso ya na Colorado."
Na ebe iwu wii wii na nzuzo na Colorado, ire ụlọ ahịa ụlọ ahịa ka akwadoghị iwu na-enweghị ikike obodo na steeti.
Ihe Hartfield kwuru na wii wii bụ akwụkwọ nri na-ewelitekwa ajụjụ gbasara nkọwa nke akwụkwọ nri. Dabere n'otú e si rie ọgwụ osisi ahụ, tetrahydrocannabinol (THC), wii wii nwere ike kewaa ụzọ dị iche iche. Otú ọ dị, ọtụtụ ndị ọkachamara na-ewere ya dị ka ahịhịa.
"Ọ bụ mgbe niile, ifuru," ka Donald Abrams, MD kwuru, "Anyị ejirila mmụọ ọjọọ machibido cannabis ma tụba ọtụtụ mmadụ n'ụlọ mkpọrọ ma bibie ndụ ọtụtụ mmadụ maka ị smokingụ ifuru."
Banyere ebumnuche Hartfield iweta wii wii n'ahịa ndị ọrụ ugbo Boulder, o kwuru na ya enwetala nnukwu nsọpụrụ na nkwado maka mbọ ya. Ọ bụghị naanị na onye ọrụ njedebe ga-erite uru site na ọnụ ala dị ala, ọ na-ekwu, mana usoro a ga-ewepụ ndị nwoke etiti, nke na-abịa dị ka ụlọ ọrụ mgbasa ozi, na-ebulikwa mkpali ndị ọrụ ugbo.
"Azụmahịa ndị ọzọ na-eto eto," Hartfield kwuru, "software, ngwaike, ngwa, vaporizers - na n'ime afọ asatọ ma ọ bụ 10 anyị ga-eleba anya na wii wii iwu kwadoro nke gọọmenti etiti."